AUNG PYI SONE AYE (Buddhism) အောင်ပြည့်စုံအေး: သကြားနှင်.ဆား စားမှသိ ( ဝေဘူဆရာတော် ဘုရားကြီး )
မေး။ သကြားအချို တကယ်သိအောင် ဒို.ကို ပြောစမ်းပါဦး။
မေး။ အဲသည်တော. ဒကာကြီးက သကြားစားနေတဲ. လူနားက ထိုင်ပြီး ချိုပြီ ချိုပြီ လို ပြောနေရ ဦးမှာလား။
ဒါကြောင်. ခုနကရုပ်နာမ်များကိုလဲ ခုနက လိုမှတ်လေ။ သကြားလိုပဲ ချိုပါလိမ့်မယ်ဗျာ။
သည်လိုမှတ်ရင်း မှတ်ရင်းနှင်. သကြားနှင်.ဆားလွဲမှား နေဦးမှာလားဗျာ.။ ဒကာကြီးက ဆားနှင်. သကြားသေသေချာချာကွဲသလား။ဒကာကြီးဟာ ဈေးထဲကို မကြာမကြာရောက်သွားပြီး
အေး...အခုလဲ သည်လိုကတော. သိနေတယ်။ဒါကရုပ်၊ဒါကနာမ်၊ဒါကသုတ်၊ဒါက၀ိနည်း၊ဒါကအဘိဓမ္မာ၊ သည်လိုတော.သိနေပါပြီ။ဘုရားရှင် ဟောတာကိုတော. မေတ္တာရှင်၊ကရုဏာရှင် တွေကလဲ မအားမပြတ်ရအောင် ညွှန်ကြားဆုံးမထားတော. ဒါကသမထ၊ ဒါက၀ိပဿနာ ဆိုပြီးသိနေတယ် မဟုတ်လား။(ဒါလဲ လုံးလုံးထွေးထွေးပါပဲဘုရား။) ထွေးလဲထွေးပစေ၊ အခုနလိုသာဂရုစိုက်ဗျာ.၊ နောက်ကျရင်လုံးထွေးမှာ မဟုတ်တော.ပါဘူး။သူ.ဟာနှင်. သူသီးသန်. နေပါမယ်ဗျာ.။
Posted by Aung Pyi Sone Aye at 9:45 PM